Savorovoro teny Ambohitrimanjaka: dimy mianadahy voasambotra, atolotra ny fampanoavana anio - ewa.mg
News - Savorovoro teny Ambohitrimanjaka: dimy mianadahy voasambotra, atolotra ny fampanoavana anio
filaminam-bahoaka”. Izay no hoe antony nisamboran’ny zandary ireo
olona dimy mianadahy, taorian’ilay savorovoro nitranga teny
Ambohitrimanjaka, ny faran’ny herinandro teo.
Efa-dahy sy vehivavy iray no
vaosambotra ny zandary omaly noho ny fanakorotanana ny
filaminam-bahoaka nataon’izy ireo nandritra ny filazana
fahaverezana zazavavikely iray 12 taona tetsy
Ambohitrimanjaka ny alahady lasa teo. “Naneli-tsaho tamin’ny
andro nikarohana ilay zaza ireo olona dimy mianadahy ireo ary
nampiteraka ny korontana teny an-toerana”, hoy ny Kaomandin’ny
Kaompania ny zandarimariam-pirenana Ambohitratrimo. Raha
atsidika ny zava-niseho dia nambaran’ireo olona dimy mianadahy ireo
fa ao anatin’ny trano iray tsy lavitry ny toeram-ponenany ihany no
misy ireo olona naka an-keriny ilay zazavavavy very nanomboka ny
alakamisy 3 jona lasa teo. Nidina teny ifotony noho izany ny
mpitandro filaminana ka nanao ny fisavana ny trano voatondro.
Nanampy trotraka koa ny fitakian’ny vahoaka tonga teny an-toerana
nitaky ny hisavana ny trano. Akory anefa ny hahatairana
fa tsy nisy na inona na inona tao amin’ireo voatondro,
nanambara ny tompon-trano fa tsy nanafina ny zaza velively izy
ireo. Tetsy an-kilany, niantso ny ray aman-dreniny ilay zazavavy fa
very teny Analakely ka nangataka ny hakana azy. “Vao teo
am-pitomaniana izahay no niantso tampoka nilay zanakay fa
very” hoy ny rainy. Taorian’io, noraisin’ny manam-pahefana ny
raharaha ka nandritra ny fanadihadiana no naha voasambotra ireo
dimy mianadahy voalaza fa nanakorotana filaminam-bahoaka ireo.
Hiakatra fampanoavana tsy ho ela kosa ny raharaha araky ny
Nifampitory ny very
zanaka sy ny voaroiroy…
Taorian’ny nahitana ilay zaza very
ny alahady lasa teo, mitohy ny tsy fifankazahoana eo amin’ny ray
aman-dreny ny zaza sy ireo olona voatondro ho nanafina ny zaza.
“Samy nametraka fitoriana avokoa ny roa tonta amin’izao fotoana
ka tsy maintsy jerena tsirairay avy izany”, hoy ny
Kaomandin’ny Kaompania ny zandarimariam-pirenana Ambohitratrimo.
Notsiahivin’ ny mpitandro filaminana fa ilaina hatrany ny
manamarina ny zavatra tenenina sy hahely mba tsy hisian’ny
fanakorotanana filaminam-bahoaka tahaka iny niseho teny
L’article Savorovoro teny Ambohitrimanjaka: dimy mianadahy voasambotra, atolotra ny fampanoavana anio a été récupéré chez Newsmada.
Amboasary Atsimo : Fanafihan-dahalo, olona 2 maty voatifitra, am-polony hafa naratra mafy
Nisehoana fanafihan-dahalo nahery vaika indray tany amin’ny Kaominina ambanivohitr’i Tsivory, ao anatin’ny Distrikan’ Amboasary Atsimo, Faritra Anosy, afak’omaly naraim-be tokony ho tamin’ny efatra ora, tao amin’ny fokontany Fandranarivo, ka fokonolona roa no namoy ny ainy ary am-polony kosa ireo naratra mafy voatifitra. Ity tanàna voatafika ity, dia miala 8 km andrefan’i Tsivory renivohitry ny kaominina, izay manaraka ny lalam-paritany (RIP 117) mihazo an’i Marotsiraka mivoaka amin’ny RN 13 ao Andalatanosy. Noho ny faharatsian-dalana misy, eo ihany koa ny fahalaviran’ny tobin’ny mpitandro filaminana ary ny tsy fisian’ny tambajotram-pifandraisana mampijaly ny vahoaka, dia miliba ireo dahalo tsy niova fo antsoin’ny mponina any an-toerana hoe : kotro izay tsy matahotra fanjakana intsony. Raha ny fampitam-baovao voaray, dia nanodidina ny 80 isa eo ireto andian-dahalo nanafika izay nitam-piadiana avokoa izy ireo. Eric ManitrisaL’article Amboasary Atsimo : Fanafihan-dahalo, olona 2 maty voatifitra, am-polony hafa naratra mafy a été récupéré chez Midi Madagasikara.
HCC Ambohidahy: nanao fanambaram-pananana ireo loholona miisa 18
Mba tsy ho fisehosehoana ivelany fotsiny ihany. Nanatanteraka ny fanambaram-pananana teny amin’ny HCC Ambohidahy, omaly, ireo loholona miisa 18 eo anivon’ny Antenimierandoholona. Nitarika izany ny filoha Razafimahefa Herimanana sy ireo mpikambana ao amin’ny birao maharitra.Anisan’ny adidy sy andraikitra lehibe tokony hotanterahin’ireo olom-boafidy eto amin’ny firenena izany, araka ny nambaran’ny avy ao anivon’ny HCC.“Adidy masina ho an’ny olom-boafidy eto amin’ny firenena ny fanambaram-pananana, ary koa ho modely ho an’ny rehetra ny antony nanatanterahana izany. Tsy tara akory ny fotoana nanaovan’izy ireo izany fa manana fahalalahana tanteraka ireo olom-boafidy amin’ny fe-potoana hanatanterahana izany”, hoy ny filoha lefitra ho an’ny faritra atsimo, Rabemananjara Nicolas. Nanteriny fa hany afaka manapaka na tara na tsia ny fanatanterahana izany ny etsy Ambohidahy.Tokony hanao izany koa rehefa miala…Tsy misy zavatra afenina ny fananana ananan’ireo loholona rehetra ary azon’ny eo anivon’ny HCC ny manamarina izany, araka ny nambarany hatrany.Na izany aza, tsy mbola nisy teto amin’ny firenena ka mba nanao fanambaram-pananana koa rehefa niala sy nandao ny toerana iray. Lasa ary tsy hita intsony ka tsy fantatra intsony ny fananany taorian’ny andraikitra noraisiny. “… Mba madio koa mivoaka eo!”Synèse R.L’article HCC Ambohidahy: nanao fanambaram-pananana ireo loholona miisa 18 a été récupéré chez Newsmada.
Nakana vola 6 hetsy Ar avy: tratra ireo roa vavy mpanondra olona mankany Arabia Saodita
Tsy mety fay mihitsy! Voasambotry ny polisy miasa ao amin’ny Service central des enquêtes spécialisées (SCES), ny alakamisy teo teny Andraisoro ireo roa vavy voarohirohy amin’ny fanondranana vehivavy mihazo an’i Arabia Saodita…Na efa norarana aza, mbola mahita hirika ihany! Loharanom-baovao no nahafantaran’ny polisy fa misy vehivavy mpanangona olona halefa any Arabia Saodita eny amin’iny faritra Andraisoro iny. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny polisy raha vantany vao nandre ny fisian’ireo manangona tovovavy ireo. Voamarina tokoa ny fisian’izany toerana fanangonana olona izany eny Andraisoro. Tokony ho tamin’ny 5 ora maraina, tamin’io alakamisy io, nanao fisavana ilay trano fanangonana olona ny polisy ka vehivavy miisa dimy no tratra tao. Nambaran’ny polisy fa ny iray amin’izy ireo no fantatra fa mpikarakara ny taratasy handehanan’izy ireo. Avy any amin’ny faritra Vohémar sy Andapa ary Sambava no fiavian’ireo tovovavy ireo ary efa herinandro izay no nahatongavany teto Antananarivo. Fantatra nandritra ny famotorana nataon’ny polisy azy ireo fa vola 6 hetsy Ar isan’olona no alain’ireo olon-dratsy amin’ireto vehivavy ireto vao tonga eto Antananarivo izy ireo. Vehivavy iray mpifanolo-bodirindrina amin’izy ireo ihany koa voasambotra tamin’io fotoana io noho ny firaisana tsikombakomba tamin’ity raharaha fanondranana olona ity. Nanamafy hatrany ny polisy fa mbola misy naman’izy ireo karohina amin’izao fotoana izao.Jean ClaudeL’article Nakana vola 6 hetsy Ar avy: tratra ireo roa vavy mpanondra olona mankany Arabia Saodita a été récupéré chez Newsmada.
Rugby vehivavy: tafiditra ao anaty «Top 50 mondial» ny Makis
Namoaka ny filaharan’ireo firenena tsirairay avy, rugby vehivavy, ny federasiona iraisam-pirenena (IRB), taorian’ny fahavitan’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ny rugby lalaovina olona 15 na ny “Africa women’s cup 2019” farany teo. Vaovao tsara ho an’i Madagasikara satria tafiditra ao anatin’ny “Top 50 mondial” ny Makis. Eo amin’ny laharana faha-41 ny misy an’i Madagasikara, amin’izao fotoana izao. Sambany ary voalohany, eo amin’ny tantaran’ny rugby vehivavy malagasy, no voalahatra ao anatin’ny laharana iraisam-pirenena. Raha tsiahivina, mitana ny laharana voalohany eran-tany, ho an’ny andriambavilanitra, ny All-blacks-n’i Nouvelle-Zelande, arahin’i Three Lions-n’i Angletera ary fahatelo ny Les Bleus-n’i Frantsa.Ankoatra izay, fahadimy aty Afrika ny Makis de Madagascar, aorian’i Afrika Atsimo, tompondaka 2019, hiatrika ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, hatao any Nouvelle-Zelande, ny taona 2021. Faharoa i Kenya, fahatelo i Namibia ary fahefatra i Zimbaboe. Azo lazaina fa nihatsara ny fampiroboroboana ny taranja baolina lavalava malagasy, amin’izao fotoana izao.Ny Makis vehivavy izay handeha hiatrika ny fifanintsanana, ho an’ny “Lalao olympika 2020”, hatao any Japon, eo amin’ny rugby lalaovina olona 7. Fihaonana, hatao any Tonizia, ny volana oktobra ho avy izao.Mandra-piandry izany, tontosa ny faran’ny herinandro lasa teo, teny amin’ny kianja Makis Andohatapenaka, ny fifanintsanana hiadian-toerana ho an’ny “Top 20”. Anisan’ny nisongadina ny fandresen’ny Cnaps Sport ny FTBA tamin’ny isa mavesatra, 44 no ho 24. Ankoatra izay, resin’ny Uscar (Fivondronana), tamin’ny isa 26 no ho 13, ny US Ikopa ary 41 no ho 10 ny nanilihan’ny Tam Anosibe ny VTMA Antsalovana raha ny STM (Savony), nampiondrika ny Matadorea, tamin’ny isa 27 no ho 22. Novizanin’ny 3FB (Fahasalamana), tamin’ny isa midangana, 27 no ho 6, kosa ny 3FAI. Tompondaka L’article Rugby vehivavy: tafiditra ao anaty «Top 50 mondial» ny Makis a été récupéré chez Newsmada.
Nosokafana, omaly, teto amin’ny kianja Anjalay, Nosy Maorisy, ny andiany faha-10 amin’ny lalaon’ny Nosy, ho an’ny ranomasimbe Indiana. Niavaka ny fampisehoana nataon’ny Malagasy nandritra ny filatroana teo amin’ny kianja.Nitondra ny sainam-pirenena malagasy tamin’izany filaharana izany Andriantsitohaina Eric, taranja fibatana fonjamby. Nisalotra ny fitafy malagasy tanteraka ireo atleta malagasy sy ireo delegasiona solontena an’i Madagasikara aty Maorisy, nandritra ny lanonam-panokafana. Anisan’ny nampiavaka antsika tamin’izany satria raha ny hita tamin’ireo delegasiona avy amin’ny Nosy rahavavy rehetra, samy nanao ilay akanjo iraisana avokoa izy ireo. Tsy nisalotra ny fitafy mampiavaka ny fireneny tsirairay. Nampisongadina ny fampisehoana ho an’ny Malagasy ihany koa ny fidiran’ireo ankizy manan-talenta, Zaza kanto, an-tsehatra, tamin’ity lanonam-panokafana ity.Ankoatra izany, manodidina ny 190 eo ny isan’ireto delegasiona malagasy nilatro ireto, ankoatra ireo vao hanainga anio, ka mitotaly 275 raha atambatra.Fahatongavan’ny filoha Rajoelina Heni-boninahitra ihany koa i Madagasikara satria natrehan’ny filoham-pirenena Rajoelina ity lanonana, omaly ity. Nigadona tao amin’ny kianjan’ny Anjalay izy sy ny vadiny, Rajoelina Mialy, tamin’ny 5 ora sy sasany hariva. Tonga nanatrika ity fanokafana ity ihany koa, ny filoham-pirenen’ny Nosy Comores sy ny Maorisianina mpampiantrano. Manampy izany ny eo anivon’ny delegasion’ny minisiteran’ny Tanora sy ny fanatanjahantena, notarihin’ny minisitra Tinoka Roberto. Miezaka manao ny farahery amin’ny fikarakarana ny Malagasy aty an-toerana ny tenany miaraka amin’ny Komity olympika malagasy (Com), tarihin-dRandrianasoloniaiko Siteny. Raha atambatara, 2000 mahery ireo mpiangaly ny taranja miisa 15 mandray anjara amin’ity lalaon’ny Nosy 2019 ity, hahitana firenena miisa 9. Eo ny Nosy Maorisy mpampiantrano, i Madagasikara, ny Nosy La Reunion, i Maldives, i Kaomoro, i Seychelles ary i Mayotte.Nikorontana ny fandraisan’ny Nosy Maorisy Marihina fa nahitana fikorontanana ny teo amin’ny lafiny fandraisan’ny Nosy maorisiana ny delegasiona vahiny tonga teto an-toerana, nanomboka ny alakamisy, lasa teo . Nisy ny fahasahiranana teo amin’ny fanomezana ny fahazoan-dalana hiditra ny kianja, ny lafiny ara-pitaterana sy ny sakafo. Somary nanakorontana kely ihany koa ny lanonanam-panokafana, omaly, ny haratsian’ny andro, minitra vitsy tsy hanombohan’ny filatroan’ireo atleta no nijohy ny orana tao amin’ny kianja. Tsy nanakana ireo mpijery teny amin’ny toerana misy azy ireo anefa izany fa niaritra ny orambe ary nijanona teo hatramin’ny farany izy ireo. Nizotra tsara araka ny tokony ho izy ihany koa, ny filatroana sy fandraisam-pitenena isan-tsokajiny. Nangonin’i Miarintsoa Raz (Iraka manokana aty Maurice)L’article JIOI 2019 – Fanokafana: niavaka ny filatroan’ny atleta malagasy tatsy Maorisy a été récupéré chez Newsmada.
Basikety 3×3 : tanora fahatelo nahavita ny “E-learning Program” i Handry
Mitombo hatrany ireo ta­nora mahazo ny mari-pankasitrahana amin’ilay “E-learning Program”. Dingana voa­lohany natrehin’ireo “Youth Leader” 21 mianadahy ity fan­daharanasa ity, ka Raza­fiminoharison Handry Ny Aina Fehizoro Abdinago, avy any Betsiboka ny tanora fahatelo nahavita izany hatramin’ny farany. Nambaran’i Handry fa tsy mora ny manao zavatra kanefa tiana ilay taranja basikety ary vao main­ka nampitombo ny fi­niavana niatrika ilay fiofanana ka izao vita soa aman-tsara izao. “Antoka hahafahana mahafantatra ny fampandrosoana ny basikety 3?3 ity fiofanana ity ka tsy kivy satria maniry ny hampivoatra izany taranja izany”, hoy ny nambaran’i Handry, tovolahy mbola tanora tokoa satria vao 21 taona monja. Raha ny fitantarany, nanomboka kilasy 1er no nilalao basikety voalohany, Razafiminoha­ri­son Handry Abdinago ary efa teny amin’ny Oniversite vao niditra klioba tao amin’ny IFPT (Tsiroanomandidy). Mbo­la maro ny dingana arahina ho an’ireo tanora isam-paritra manaraka ny programa ka efa miomana sahady i Handry, saingy miankina amin’ny fivoaran’ny toe-draharaha ara-pahalasamana eto amin’ny firenena ny tohin’ny fiofanana.Mi.RazL’article Basikety 3×3 : tanora fahatelo nahavita ny “E-learning Program” i Handry a été récupéré chez Newsmada.
News - Santé - Ao Raha
FAHASALAMANA :: Am-polony ireo voan’ny diabeta nandritra ny fitiliana teto Antananarivo
Olona roa ambin’ny folo no fantatra fa voan’ny diabeta. Io no valin’ny fitiliana maimaim-poana notanterahina teto Antananarivo, ny alarobia lasa teo sy teny Faravohitra ary tetsy amin’ny Hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavaloa na HJRA ny sabotsy lasa teo. Tao anatin’ny hetsika fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny diabeta hatrany no nanaovana ity fizahana ho an’ny rehetra ity. Olona efapolo amby azo no tonga teny amin’ny foiben’ny Andia Malagasy miady amin’ny Diabeta na Amadia ka ny roa amin’izy ireo no fantatra fa voan’izany. Tamin’ny sabotsy, tonga maro be ireo olona nanao ny fitiliana satria enimpolo sy telonjato izy ireo no namaly ny antso. Olona folo no fantatra fa diabetika nandritra ny fitiliana maimaim-poana natao tamin’izany. Nisy ihany koa ireo olona efa manana ity toe-tena diabetika ity no nanararaotra ny fisian’ity fitiliana maimaim-poana ity tamin’ny sabotsy teny amin’ny HJRA. Miisa iraika amby telopolo izy ireo no fantatra fa nanatanteraka izany. Tsiahivina fa tena ilain’ny diabetika ny fanaovana fitiliana mba hahafantarana ny fivoaran’ny aretina. “ Mila manatona mpitsabo ireo olona vao fantatra fa manana ity toe-tena ity. Ilaina kosa ny manohy ny fitsaboana mahazatra ho an’ireo efa manana izany toe-tena izany”, hoy ny mpitsabo iray teny an-toerana ny sabotsy lasa teo. L’article FAHASALAMANA :: Am-polony ireo voan’ny diabeta nandritra ny fitiliana teto Antananarivo est apparu en premier sur AoRaha.
Filoha teo aloha, Ravalomanana: “Aoka hajaina sy arahina ny lalàna…”
Nitondra ny heviny. “Rehefa lalàna dia lalàna. Antony tena ilàna ny mpanohitra sy ny hampiharana ny demokrasia izany hahafahana milaza ny marina. Hanaja ny lalàna, hanaja ny lalàmpanorenana, hanaja ny zon’olombelona”, hoy ny filoha nasionalin’ny Tim, Ravalomanana Marc. Anisan’ireo nasaina tamin’ny fetim-pirenen’i Soisa natao teny Ambohibao, afakomaly ny tenany sy ny ben’ ny Tanàna, Ravalomanana Lalao. Ankoatra izany, nambarany fa matoky ny tenany sy ny vahoaka fa hanana ny maha izy azy ity fifidianana ben’ny Tanàna ity.Notsiahiviny avy eo ny fitsidihana nataony tany ivelany ka nilazany fa nahita ny tena marina tany amin’ny “Vondrona eoropeanina” (UE) ny tenany. “Fantatro ny marina tamin’ny fifidianana filoham-pirenena. Tena mampalahelo sy mahamenatra ary mahatezitra. Tsy vitan’izany fa tena mahasosotra satria any ivelany indray no mahalala ny tena nisy”, hoy izy.Miantso fifampiresahana amin’ny mpitondra Tsiahivina fa efa nanambara ny fahavononany ny sehatra iraisam-pirenena hanampy sy hanohana an’i Madagasikara, saingy nametraka fepetra, araka ny tatitra nataon-dRavalomanana, ny herinandro teo tetsy Bel’Air. « Tsy maintsy hapetraka aloha ny tena demokrasia sy ny fifampitokisana, indrindra ny fitoniana politika. Ilaina ny mifampiresaka amin’ny filoha am-perinasa Rajoelina Andry. Miandry izany ny sehatra iraisam-pirenena”, hoy izy.Synèse R. L’article Filoha teo aloha, Ravalomanana: “Aoka hajaina sy arahina ny lalàna…” a été récupéré chez Newsmada.
Rap ara-pilazantsara: nitondra “Carpediem” i Aaron Pretra
Mozika ara-pilazantsara… Namoaka ny “Carpediem” i Aaron Pretra, mpiangaly ny gadona Rap, mitory ny tenin’Andriamanitra an-kira. Vazo anisan’ny hirakitra ilay rakikira “Pandemia”, hivoaka afaka volana vitsivitsy izy ity. Notontosain’ny trano mpamokatra ShotRec RAP Rima Art. Ezahina ny hamoaka tsirairay ireo hira hirakitra ny “album” “Pandemia” mandra-pivoakany ary mbola misy hira sivy manaraka ny “Carpediem”. Raha fintinina, aingam-panahy avy amin’ny tenin’i Jesosy hoe, “Aza manahy ny ampitso ianareo, fa ny ampitso hanahy azy”, izany hoe, hihaino ny androany fa tsy fantatrao izay havoakan’ny ampitso, araka ny nambaran’i Aaron Pretra. Tanjony moa ny hitaona ny olona rehetra hanatona an’Andriamanitra ary tsy manavaka finoana ny mozika ataony. “Ohariko amin’ny voankazo fihinam-boa, na dia midoroboka be aza ny sampany sy ny raviny, rehefa tsy misy voa dia zava-poana ihany. Fiandrandrana hioty “voa” no antony hikarakarana azy mba ho tsara sy hamokatra. Matiantoka raha namboly ianao nefa nijanona teo amin’ny raviny midoroboka fotsiny, fa tsy nisy voa”, hoy izy, nanao fanoharan-teny.NarilalaL’article Rap ara-pilazantsara: nitondra “Carpediem” i Aaron Pretra a été récupéré chez Newsmada.
Alan’i Tsiazompaniry: mahasarika mpizahantany
Azo isarihana mpizahantany. Anisan’ireo ala voajanahary arovana ny ao Tsarafara, Tsiazompaniry, any amin’ny distrikan’Andramasina. Mirefy 6 000 ha izany ka ala arovana ny 1 059 ha amin’izany. Ahitana varongy mainty, voamboana, lanona, « orchidées » ary sifaka sy gidro ao, ankoatra ny farihy lehibe. “Mahatratra 100 ha no voafaritra ao anatin’ny 1059 ha, ary ao no tena misy ireo hazo, voninkazo ary biby tena arovana”, hoy ny mpitarika ny VOI Tsarafara, Rakotondramanana sy RaseliarisonMiaro sy mitantana ary manajary izany ny Vondron’olona ifotony (VOI) Tsarafara, misy mpikambana 178 avy amin’ireo tanana : Andriankely, Anamamy, Fasanilavakanjo, Ambilanijia. Ezaka ataon’izy ireo ny fambolen-kazo sy ny aro afo. Nidina tany an-toerana ny avy amin’ny Tafomihaavo sy ny tambajotran’ny fokonolona miaro ny harena voajanahary notarihin’ny filohany, Ramanandraibe Louis de Gonzague. Hita tamin’izany fa misy ampahan’olom-bitsy mikendry ho tompon’ny ala voajanahary arovan’ny VOI. Efa miroso amin’ny fanaovana « borne » izy ireo. Manahy ireo fokonolona fa ho tandindomin-doza ny famatsian-drano an’Antananarivo sy ny manodidina, indrindra ny lemank’i Betsimitatatra. Ho potika koa ny ala ary ho very maina ny ezaka nataon’ny VOI tao anatin’ny 20 taona. Manaitra ny tompon’andraikitra isan-tokony izy ireo noho izany hijery akaiky izao raharaha izao.Synèse R.L’article Alan’i Tsiazompaniry: mahasarika mpizahantany a été récupéré chez Newsmada.
« Raharaha Nosy Sambatra » – Iles Glorieuses: manomana ny hamaly bontana an’i Frantsa ny fanjakana
Anisan’ny niaka-tsehatra teo anivon’ny Antenimierampirenena nanao tatitra tamin’ny alalan’ny visioconference, omaly, ny minisitry ny Raharaham-bahiny, i Tehindrazanarivelo Djacoba. “Efa mivonona amin’ny fomba hamaliana an’i Frantsa sy ny antontan-taratasy rehetra hanoherana ny azy ireo isika », hoy izy. Anton’izany ny didim-panjakana noraisin’ny fitondrana frantsay momba ny Nosy Sambatra « Iles Glorieuses », tafiditra ao anatin’ireo Nosy manodidina fa hatao tahiry ara-boajanahary faha-170 ho azy ireo. Hanohitra sy hitsipaka marindrano izany ny fanjakana raha miainga amin’io minisitra io.Notsiahiviny fa efa nampiantsoiny teny Anosy ny ambasadaoro frantsay ny volana mey tamin’ny taona 2020 ary nilazany fa tsy hanaiky velively ny hanaovana ho faritra frantsay ara-boajanahary ireo Nosy ireo ny Malagasy. “Tena midika ho tsy fanajana ny fifampiraharahana efa an-dalana eo amin’ny firenena roa tonta momba ireo Nosy manodidina izao ataon’i Frantsa izao”, hoy ihany izy. Anisan’izany ny Nosy Bedimaky (Juan de Nova), ny Nosy Ampela (Europa) ary ny Nosy Kely (Bassas da India).Fanohanan’ny Sadc an’i MadagasikaraEtsy andaniny, efa nanao fanambarana ny filankevitry ny minisitry eo anivon’ny Fiaraha-miasa ara-politika sy ny fiarovana ary ny filaminana (CMO) eo anivon’ny Sadc, ny volana jona 2020; fa manohana 100% ny fanjakana malagasy izy ireo amin’ny fitakiana ireo Nosy ireo. Takin’izy ireo ny hampiharana ny fehinkevitra navoakan’ny filankevitry ny minisitra teo anivon’ny Firaisambe afrikanina (OUA) ny 20 jolay 1979 sy ny fehinkevitra navoakan’ny fivoriamben’ny Firenena mikambana (ONU) ny 12 desambra 1979. Voalaza ao anatin’ny fehinkevitra tamin’izany fa tafiditra ao anatin’ny faritry ny Repoblikan’i Madagasikara ireo Nosy ireo.Harena voajanahary tsy hita noanoaTsiahivina fa namoaka didy ny fanjakana frantsay ny talata 8 jona teo ary nanamafy fa tafiditra ao anatin’ny tahiry ara-boanajahary “Réserves naturelles” an’i Frantsa ny Nosy Sambatra. Tsy vitan’izany fa mbola nohamafisina tao amin’ny gazetim-panjakana frantsay , ny Journal officiel, izany didy izany ny alakamisy 10 jona.Anisan’ny mampiavaka ity Nosy Sambatra ity ny fananany karazan-javamaniry sy biby maherin’ny 2 500 ary tsy fahita manerana izao tontolo izao. Ahina sy atahorana ny 20% amin’izany.Synèse R.L’article « Raharaha Nosy Sambatra » – Iles Glorieuses: manomana ny hamaly bontana an’i Frantsa ny fanjakana a été récupéré chez Newsmada.
Ampanihy – Atsimo Andrefana: tsy ampy ny rano, lafo ny vary, ratsy ny lalana
Mijaly rano ny mponina any Ampanihy, faritra Atsimo Andrefana, maina ny tany, lafo ny vary, ary ratsy dia ratsy ny lalana. Ireo ny olana amin’ny ankapobeny mahazo ny mponina. Herinandro maromaro izao, tsy mahazo rano ny mponina na tsy ampy ny rano avy amin’ny Jirama. Milina mandeha amin’ny herin’ny masoandro no mampiakatra ny rano avy any ambany mankany ambony toerana. Rehefa ratsy ny andro, mihodina ihany ny milina, rehefa ratsy ny andro, tsy mandeha ny milina satria tsy misy “batterie” nanomboka ny volana marsa tamin’ity taona ity. Volan’ny CLD (Comité local de développement) anefa nividianana ny milina. Koa noho ny tsy fahampian-drano, lasa mividy rano amin’ny vovo ny olona, 400 Ar ny daba 20 l. Mavesatra ho an’ny tokantrano maro izany, satria tsy ampy iray andro mihitsy ny rano 20 l.800 Ar ny kapoakan’ny varySahirana ihany koa ny mponina amin’ireo zavatra ilaina andavanandro (PPN), indrindra ny vary, 800 Ar ny kapoaka; menaka, 8000 Ar ny litatra ; siramamy, 1100 Ar ny kapoaka. Mampihemotra ny fari-piainan’ny olona daholo ireo, tsy mifandanja ny vola miditra sy mivoaka. Tsy tafita amin’ny vahoaka maro anisa ny tarehimarika navoakan’ny praiminisitra momba ny tahan’ny vidim-piainana, fa ireo PPN saika misondro-bidy isan’andro ny hitany.Olana iray goavana iainan’ny mponina hatramin’ny taona maro ny lalana RN10. 250 km avy eo Andranovory, 30 000 Ar ny saran-dalana avy any Toliara, atao iray andro amin’ny fiara lehibe mpitatitra, misy olona 80 ao anatiny miampy entana ambony sy ambany. Mihantona ny tongotra mandritra ny dia, resaka fotsiny izany elanelana sakana amin’ny valanaretina izany, araka ny filazan’ny mponina. Tany lavitra andriana. R.MathieuL’article Ampanihy – Atsimo Andrefana: tsy ampy ny rano, lafo ny vary, ratsy ny lalana a été récupéré chez Newsmada.
Nécrologie du 17 juin 2021
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 17 juin 2021 est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Nécrologie du 17 juin 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Kaominina manamorona ny lalamby: hamakian-dalana hifandray amin’ny lalam-pirenena faharoa
Vahoaka 79.883 avy amin’ny fokontany 34 anatin’ny kaominina ambanivohitra dimy ny manamorona ny lalamby Antananarivo-Toamasina, anivon’ny disitrikan’i Brickaville, faritra Atsinanana. Nanao fitsidihana tany an-toerana, ny 9 sy 10 jona 2021, ny governora Rafidison Richard Théodore sy ireo delegasiona niaraka taminy. Fanadihadiana“Tsy tokony hisy intsony ny kaominina lavitra andriana tsy misy lalana, vesaran’ny tsy fahasalamana sy fanabeazana tsizarizary mahazo ny zanaka malagasy any ambanivohitra. Hamafisina ny fandriampahalemana sy fanatsarana ireo fotodrafitrasa maro. Tsy ekena hitoka-monina intsony ireo kaominina sivy “, hoy ny governora lehiben’ny faritra Atsinanana, Rafidison Richard Théodore.Tamin’ireo kominina dimy, sambany teo amin’ny tantaran’ny kaominina Vohipeno Razanaka, Fanasana, ary Lohariandava no mba nisy tompon’andraikitra nitsidika notronin’ny solombavambahoaka voafidy tao Brickaville, i Satra Augustin. Ho an’ny kaominina Anivorano manokana dia nasian’ny governora maso ny fanarenana ny biraon’ny paositra sy baka ho fiampitana ny reniranon’ny Rianila mihazo ny kaominina Fetraomby, Maroseranana, ary Ambohimanana. Tsy maintsy hamaky lalana hifandraisana amin’ny RN2 ny kaominina rehetra manamorona ny lalamby, hisian’ny fampandrosoana. Any Vohipeno Razanakana, 4 km hanaovana asa tanamaro hifandraisana amin’ny RN2 ; 25 km Lohariandava sy Andekaleka, ary 19 km avy eo Andekaleka hatreo amin’ny RN2.Notolorana vary fotsy 10 gony sy voamaina ireo mpanao asa tanamaro hamaky lalana. Na izany aza, tohizana ny fifampiresahana amin’ny mpandraharaha ao amin’ny orinasa Madarail, hiverenan’ny fitaterana olona an-dalamby, izay heverina hatomboka amin’ny volana aogositra izao, rehefa niato taorian’ny lozam-pifamoivoizana nahafoizana ain’olona maro, ny taona 2018.FotodrafitrasaHamafisina ny fandriampahalemana any anivon’ny kaominina, hametrahana zandary. “Izany rahateo no hamakiantsika lalana hanamora ny fahatongavan’ny zandary raha sendra hitrangana asan-jiolahy, hanamora ihany koa ny famonjena aina raha misy tsy fahasalamana hanatona toeram-pitsaboana, ankoatra ny famoaham-bokatra”, hoy hatrany ny lehiben’ny faritra.Hodinihina ihany koa ny hitsinjarana ny herinaratra avy ao Lohariandava na koa ny hanomezana jiro mandeha amin’ny herin’ny masoandro. Amin’ireo kominina 18 mandrafitra ny disitrikan’ i Brickaville, sivy ihany no misitraka tambajotram-pifandraisana ka hanaovan’ ireo ben’ny Tanàna antso ho an’ny tompon’andraikitra misahana izany.Kaominina mamokatraKaominina manana vokatra isan-karazany ireo manamorona ny lalamby, ohatra, ny sakaitany, ny tamotamo, indrindra ny akondro, izay misy aman-jato taonina isan-kerinandro, araka nyVoalazan’ireo ben’ny tanàna. Any Vohipeno Razanaka manokana, iray mampiakatra vary tsy latsaky 35 t. Kaominina notoloran’ny governora masomboly 500 kg. Misedra olana amin’ny famoaham-bokatra anefa ireo kaominina ireo ka izany indrindra no tsy maintsy hanaovana lalam-baovao hahatongavan’ny fiara manangom-bokatra. L’article Kaominina manamorona ny lalamby: hamakian-dalana hifandray amin’ny lalam-pirenena faharoa a été récupéré chez Newsmada.